तातो पानी पिउने बानी छ भने एकचोटी नछुटाई पढ्नुहोस है – NepalajaMedia
February 10, 2021 329
४. शरीर सफा गराउँछ: तातो पानी पिउनाले शरीर सफा गर्नलाई मद्दत मिल्छ । र यसले शरीरका धेरै खराबीहरुको सजिलैसँग सफा गरिदिन्छ । तातो पानी पिउनाले शरीरको तापमान बढ्न जान्छ । जसले पसिना निकाल्छ र यसको माध्यमबाट शरीरको विकारलाई बाहिर फाल्न मद्दत गर्छ ।५. अनुहारमा कलिलोपना आउँछ: तपाईंको अनुहारको छालाले तपाईंलाई दुःखी बनाएको छ भने चिन्ताको नलिनुहोस् । आजैदेखि तातो पानी पिउन सुरुवात गर्नुहोस् केही हप्तामै परिवर्तन देख्नुहुन्छ । छालाका अंगहरु नरम हुनेछ र चमक पनि बढ्नेछ ।
Prev२१ वर्षकी युवतीको संसारभरीका पुरुषलाई अफर : १ लाख जनासँग यस्तो रेकर्ड बनाउँने लक्ष्य
Nextआज बाट इतिहासकै दुर्लभ ६ वटा ग्रह एक स्थानमा आउदै ! देशमा ठूलै परिवर्तनकाे संकेत ।
धनुजन्ती जाँदै गरेको मोटरसाइकल सिरहाको मिर्चैयामा बसमा ठोक्किँदा २ सवार को ज्यान गयो ।